यस्तो जिब्रो भएका व्यक्ति हुन्छन् रोगी, तपाईको जिब्रो कस्तो ? - उपयोगी info
यस्तो जिब्रो भएका व्यक्ति हुन्छन् रोगी, तपाईको जिब्रो कस्तो ?
Pradeep karki March 3, 2022
जिब्रोको रङको मद्दतले तपाईले आफ्नो स्वास्थ्य कस्तो छ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको जिब्रोको रंग परिवर्तन हुन्छ भने बुझ्नुहोस् कि तपाई कुनै रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ। वास्तवमा, जिब्रोको रंग सामान्यतया हल्का गुलाबी हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ रोगको कारण जिब्रोको रंग परिवर्तन हुन्छ। त्यसैले जिब्रोको रङ परिवर्तन भएमा बेवास्ता नगरी चिकित्सकसँग जाँच गराउनुहोस्।
हामीले तपाईलाई भनेका छौं कि सामान्यतया जिब्रोको रंग हल्का गुलाबी हुन्छ। यद्यपि कतिपयको जिब्रोमा हल्का सेतो कोटिंग हुन्छ। जसका कारण जिब्रो अलिकति सेतो देखिन थाल्छ । जुन सामान्य हो ।
निलो रंगको जिब्रो : जिब्रोको रङ नीलो भएमा सावधान रहनुहोस्। नीलो रङको अर्थ तपाईलाई मुटु सम्बन्धी कुनै रोग लागेमा जिब्रोको रङ नीलो हुने विश्वास गरिन्छ । मुटुले राम्रोसँग रगत पम्प गर्न नसकेमा वा रगतमा अक्सिजन कम हुँदा यस्तो समस्या आउने गर्दछ । कहिलेकाहीँ रगतमा अक्सिजन कम हुँदा नङको रङ पनि नीलो हुन थाल्छ । यदि तपाईलाई यस्तो अवस्था देखियो भने तुरुन्तै डाक्टरसँग जाँच गराउनुहोस्। ताकि समयमै उपचार पाउन सकियोस् ।
कालो रंगको जिब्रो : जिब्रोको कालो रंगलाई क्यान्सर जस्तो घातक रोगको संकेत मानिन्छ । यसबाहेक अल्सर वा फंगल इन्फेक्सन भएमा पनि जिब्रोको रङ कालो हुन थाल्छ। चिकित्सकले समयमै उपचार नगरेको अवस्थामा यो बिग्रन पनि सक्छ ।
पहेँलो जिब्रो : जिब्रोको रङ पहेँलो हुनु पनि सामान्य मानिदैन। चिकित्सकहरुका अनुसार जिब्रोको रङ पहेँलो हुन थालेपछि शरीरमा पोषक तत्वको कमी भएको हो भनेर बुझ्नुपर्दछ । साथै पाचन प्रणाली पनि राम्ररी काम गर्दैन । कहिलेकाहीं कलेजो वा पेटसम्बन्धी रोगका कारण जिब्रोको रङ पहेँलो हुन्छ । त्यसैले जिब्रोको रङ पहेँलो भयो भने अवश्य चिकित्सककहाँ गएर चेकअप गराउनुपर्छ।
सेतो जिब्रो : जिब्रोको सेतो रङले पनि गम्भीर रोगको संकेत गर्छ। जिब्रो पूरै सेतो हुन थाल्यो भने शरीरमा पानीको कमी हुने समस्या मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा पानी बढी पिउनुपर्छ । जसले गर्दा शरीरमा हुने डिहाइड्रेसनको समस्या ठीक हुन्छ । धुम्रपानका कारण जिब्रोको रङ पनि सेतो हुन्छ । ल्युकोप्लाकिया रोगका कारण कतिपयको जिब्रो सेतो हुन थाल्छ ।
यसरी आफ्नो जिब्रोको ख्याल राख्नुहोस् : आफ्नो जिब्रो दैनिक सफा गर्नुहोस्, बिहान र राती सुत्नुअघि जिब्रो सफा गर्न नबिर्सनुहोस्।, यसलाई जिब्रो क्लिनरको मद्दतले सजिलै सफा गर्न सकिन्छ।, धेरै पानी पिउनाले जिब्रो सफा राख्छ र ब्याक्टेरियालाई पनि मार्छ। (दैनिक भाष्कर (हिन्दी) बाट नयाँ पुस्ता डटकमले गरेको नेपाली अनुवाद)
किशोरावस्थामै सुन्निन्छ पाठेघर, किन यस्तो हुन्छ र कसरी पत्ता लगाउने ?